मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए खानुहोस डल्ले खुर्सानी, यति धेरै फाइदै फाइदा – Khabar Patrika Np
मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए खानुहोस डल्ले खुर्सानी, यति धेरै फाइदै फाइदा
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१, २०७८ समय: २३:१६:०८
काठमाडौँ -तपाई हाम्रै घरमा पाइने डल्ले खुर्सानी हाम्रो स्वास्थका लागी अचुक औषधी हो ।यसको नियमित सेबनल मोटोपन घटाउन सहयोग गर्छ ।
डल्ले खुर्सानीमा पाइने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुग्ने बताइएको छ ।त्यस्तै नियमित सेवनले ग्यास्ट्रिक तथा अल्सरको संक्रमण बाट बचाउनु सहयोग पुर्याउछ ।
विशेष गरेर अकबरे खुसार्नी हालेर बनाइएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ। यसले पिसाबको बिरामीलाई फाइदा पुर्याउनुका साथै थकाइ पनि मेटाउँछ ।हाडजोर्नी लगायतका दुखाइ घटाउँछ ।
आफूलाई हाइड्रेट राख्दा युरिक एसिडको स्तर नियन्त्रणमा रहन्छ । दैनिक ८–१० गिलास पानी पिउनुहोस् । दैनि ताजा र मौसमी फलफूलको सेवन गर्दा शरीर स्वस्थ रहन्छ र युरिक एसिडको स्तर पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । यसबाहेक केराको सेवन गर्दा पनि शरीर सुन्निन कम हुन्छ
केही मानिसहरुको मान्यता छ कि पालुङ्गोको सेवन गर्दा युरिक एसिड बढ्छ तर पालुङ्गोको सिमित मात्रामा सेवन गर्दा कुनै समस्या हुँदैन । यसबाहेक दुध र दुग्धजन्य पदार्थको सेवन पनि सुरक्षित छ । सही अनुपातमा अण्डाको सेवन गर्दा पनि युरिक एसिडको स्तर बढ्दैन । मासु र माछाले पनि तपाईंको युरिक एसिडको स्तरलाई बढाउँदैन । तपाईं यसलाई सिमित मात्रामा हप्तामा दुईदेखि तीन पटक खान सक्नुहुन्छ । यसै प्रकार व्यायामलगत्तै व्हे प्रोटिनको सेवन गर्न सकिन्छ ।